Guardiola oo ka hadlay dhaawaca soo gaaray De Bruyne & go’aankiisa kaga aadan kulanka Manchester derby – Gool FM
Guardiola oo ka hadlay dhaawaca soo gaaray De Bruyne & go’aankiisa kaga aadan kulanka Manchester derby
Dajiye March 5, 2020
(Manchester) 05 Mar 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka hadlay dhaawaca soo gaaray Kevin De Bruyne iyo go’aankiisa kaga aadan kulanka soo aadan ee Manchester derby.
Kevin De Bruyne ayaa ku dhaawacmay kulankii finalka ahaa ay kooxda Aston Villa kaga guuleystteen koobka Carabao Cup, wuxuuna seegay ciyaartii xalay Sheffield Wednesday ee koobka FA Cup kaasoo ku soo idlaaday 0-1 ay ku adkaatay Sky Blue.
Haddaba Pep Guardiola ayaa ciyaarta kaddib wuxuu kala hadlay warbaahinta dhaawaca soo gaaray xiddiga reer Belgium ee Kevin De Bruyne wuxuuna yiri:
“De Bruyne wuxuu ku dhacay xaalad xun oo dhibaato ah, waxay dhaawac ka soo gaartay dhanka gadaale ee dhabarka, ilaa iyo hadda kama war qabno mudada uu ka maqnaan doono kooxda”.
“Waxaan rajeyneynaa in Kevin De Bruyne uusan ka maqnaan doonin kooxda waqti dheer” ayuu yiri macalinka reer Spain ee Pep Guardiola.
Virgil van Dijk oo si adag kaga jawaabay eedeymaha loo soo jeediyay kooxda Liverpool
Afar kooxood oo sugeysa go’aanka uu Ivan Rakitic kaga tagayo Barcelona